तौल घटाउनका लागि पाउरोटी हानिकारक ! - Online Sajha	Online Sajha
तौल घटाउनका लागि पाउरोटी हानिकारक !
बिहानको समयमा खाने खाजामा धेरैजसो मानिस पाउरोटीको सेवन गर्ने गर्छन्।
बजारमा सजिलै किन्न पाइने, यसलाई चियासँग यत्तिकै खान मिल्ने वा टोस्ट वा स्यान्डविच बनाउन पनि धेरै समय नलाग्ने हुँदा यसको धेरै प्रयोग हुने गर्छ।
तर तौल घटाउन चाहने मानिसका लागि पाउरोटीको सेवन फाइदाजनक नहुन सक्छ। सामान्य खाइने पाउरोटी सेतो रङको हुन्छ। यो पिठो वा मैदाबाट बनाइएको हुन्छ।
सेतो पाउरोटी स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिँदैन। यसको सेवनले शरीरको तौल बढ्नुका साथै स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर गर्छ। यसमा आवश्यक पोषक तत्व र फाइबरको अभाव हुन्छ। यसमा प्रशोधन गरिएको कार्ब्स र फाइबरको पनि अभाव हुन्छ। जसकारण पाउरोटीको सेवन गरेपछि पनि पेट पूर्ण रूपमा भरेकोजस्तो महसुस हुँदैन।
पाउरोटीको उच्च सेवनले तौल बढाउनुका साथै मधुमेह, हृदय रोग र अन्य स्वास्थ्य समस्या बढाउने काम गर्छ। प्रशोधित मासु, बटर र मेयोनिजको प्रयोग गरेर पाउरोटीले बनाएको स्यान्डविच खानाले शरीरको बोसो र क्यालोरी बढाउन सक्छ। जसले तौल बढाउने गर्छ । तौल घटाउनका लागि मल्टिग्रेन पटउरोटी स्वस्थ विकल्प हुन सक्छ।
अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनका अनुसार सम्पूर्ण अन्नबाट बनेको मल्टीग्रेन पाउरोटीमा भिटामिन बी, फोलिक एसिड, फलाम, म्याग्नेसियम, सेलेनियम र फाइबर समावेश छ। मल्टीग्रेन पाउरोटीको सेवनले पेटलाई लामो समयसम्म भरिपूर्ण राख्छ, पाचनलाई बढावा दिनुका साथै शरीरलाई पोषण दिन्छ।